तिमी अर्थात घाउ | मझेरी डट कम
तिमी अर्थात घाउ
lonelybikash — Sun, 11/04/2012 - 11:44
तिमी के हौ मेरो निम्त ? जवाफ म आफैसँग छैन । शायद पीडाको परिभाषा तिमी नै हौ मेरो लागि । र त चार वर्षपछि आज तिमीलाई अनायासै भएको भेटपछि तनावले मलाई साक्षात्कार गरिरहेछ पलपल । मेरो सामान्य स्वस्थ दैनिकि बिथोलियो तिमीसँगको एकछिनको संगमले । बल्ल-बल्ल मेटएको घाउ बल्झिएको छ । त्यो कता-कता लुकेको घाउ यति विकराल बनिरहेछ कि मेरो सारा प्राणदेखि लिएर मस्तिष्कसम्म नमिठो आघात दिइरहेछ । असहनिय वेदना । अहिले मैले मेरो वर्तमान सबै बिर्सिए । असामान्यावस्थामा घुमिरहेछु तिम्रै कारण । चारैतिर तिमी र तिम्रा ती मिठो सम्झना तितरवितर भई छरिएका छन् । पीडा अँगालेर ।
त्यतिबेला हामी भर्खरै मित्रताको डोरीमा बाधिएका थियौ । तिमीमा के जादु थियो थाहा छैन । तर म नजानिदो पाराले ख्यालख्यालैमा तिमीप्रति आकर्षित हुदै गए । तिम्रो कुरा गर्ने बेला मुस्काउने बानी नभएको भए तिमीसँग प्रेम हुन्थेन होला । जे होस् तिमीप्रतिको झुकावमा केही अनर्थ थिएन । मेरो प्रेम प्रस्तावलाई लत्याइदिएको भए पनि के हुन्थ्यो ? केही दिन दुख्थ्यो मेरो मन तर पछि शान्त पनि त हुन्थ्यो होला । तिमीले के देख्यौ ममा ? शायद तिमी नै जान्दछौ । मलाई सहजै स्वीकार गर्यौ । के के न जितेझै भान भयो मलाई । सबैतिर खुशी देख्न थाले । जीवन सुखतिर मोडिएको थियो ।
केही समयको लागि टाढिन पुगे तर तिमीले प्रतिक्षा गर्न सकेनौ मेरो । कारणवश तिम्रो सिउदो रंगियो अरु कसैको हातबाट । तिम्रा वाचा कसम अनि चोखो प्रेमभन्दा बलियो बनिदयो घर परिवारको दबाब । म कति सपना सँगालेर तिमीलाई भेट्न खोज्दा अरुकै मुखबाट तिम्रो बिहेको खबर सुने । त्यतिखेर म कति विक्षिप्त भएको थिए, त्यो बुझ्ने पनि कोही थिएन । एक हिसाबले म पागलसरी भइसकेको थिए । तर समयभन्दा बलवान कोही नहुदोरहेछ । म बिस्तारै बदलिए । सामान्य बन्दै गए । तिम्रा सम्झना पनि धमिलिदै गए । तिम्रा तस्विर, चिनो, पत्र म बारम्बार हेर्दथे । तिनलाई सुम्सुमाउथे । अनि त्यो अल्पसुख मिसिने पीडा पनि रमाइलो लाग्थ्यो । क्षणिक आनन्द दिलाए पनि अनन्त पीडामा म पिल्सिदै गए ।
तिमीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्झनाका चिजहरू मेटाउदा अनि जलाउदा मलाई धेरै सकस लागेको थियो । तर त्यसको समाप्ति पश्चात क्रमशः सामान्य बन्दै गए । त्यतिखेर ती चिज सँगालेर राखेको भए म पूर्णरुपमा पागल भई सक्ने थिए । तिम्रो छाया सम्म पनि बिर्सिसकेको थिए । तिम्रो नाम नै यो मनबाट हटिसकेको थियो तर आज तिमीले मलाई फेरि पीडाको महासागरमा धकेलिदियौ । तिम्रा मधुर बोली, शिष्टर व्यवहार पनि मेरो लागि कति विषादपूर्ण र पीडादायी हुन्न्छ । तिमीमा त्यो कुरा बुझ्ने क्षमता छैन । तिमी र ममा धेरै अन्तर छ … वैचारिक अन्तर । अनि भावनात्मक रुपमा हामी बेग्लै छौ शीला । उफ ! बिर्सिसकेको तिम्रो नाम फेरि पनि बर्बराउन थालेछ यो मुखले ।
आज तिमीले अचानक मलाई नाम काढेर बोलाउदा मलाई सपनाझै लागेको थियो । मैले सोचेको थिइन तिमी अर्थात 'पीडा' म सामु पुनः उभिन्छ भनेर । मनै त हो फेरि पनि तिमीतिर झुकिहाल्यो । तिम्रो सिन्दुर पोतेको अर्थ केही बुझिन । उही शीला पाए झै लाग्यो । शायद तिम्रो गन्तव्यतर्फ जाने गाडी नआउन्जेल म तिम्रो समय कटाउने माध्यम बने । तर म अतिततिरै पुगेछु एकक्षण । मैले अवगत गराइन । शायद तिमीले बुझ्यौ होला आखाको भाषाले अनि मेरो मौनतामा मेरो भावना चित्राङ्कित भएको हुनुपर्छ । नत्र तिमीले मेरो हात कसेर समाउने अधिकार गुमाइसकेकी छौ । प्रेमले भरिएको नशालु आखामा मप्रतिको माया आशु बनी टिलपिल गरी झरेको मैले देखे । म पग्लिए अनि तिमीलाई आड दिन पुगेछु । तिमी के के बर्बराउन थाल्यौ केही अर्थोचित छैन अहिलेको परिस्थितिमा । शायद तिमी आफ्नो जीवनसँग सन्तुष्ट छैनौ र त आफ्नोा वास्तविकता भुल्यौ । कर्तव्यदेखि टाढा धेरै टाढा भागी अमान्य व्यवहार गर्नपट्टि लाग्यौ । तिम्रो गाडी नआउञ्जेालको समय सुखानुभुति दिलाउने भएपनि मैले वास्तविकतादेखि भाग्न चाहिन । मलाई त्यति समय काट्न निकै असहजपूर्ण लागेको थियो ।
तिमीले मेरो फोन नम्बर माग्यौ । कहिल्यै तिमीसँग झुट नबोल्ने म, मैले भने "मैले मोबाइल बोक्ने गरेको छैन ।" जाने बेला तिमीले एउटा कागजमा आफ्नो सम्पर्क नम्बर लेखेर दियौ । गाडीको ढोकामा उभिएर मलाई देखुञ्जे लसम्म कारुणिक मुहारमा प्रेमपूर्ण दृष्टि अड्याई मलाई हेर्दै बिदाइको हात हल्लाइरह्यौ । मलाई चसक्क दुख्यो् तिम्रो रुप र मप्रतिको पुनराकर्षणले । म केही विचलित भए ।
त्यो आधा घण्टा जतिको भेटले पुनर्मिलनको सुखदाभाष गराए पनि फेरि पनि मलाई पीडामा पिल्साई पागल बनाउने सङ्केत गरिरहेथ्यो । तिमीले दिएको कागज हेर्दै नहेरी च्यातेर सडकछेउ फालिदिए । भारी मन लिएर केही पछुतो अनि केही सङ्कल्पका साथ फर्किए । पुरानो घाउ नबल्झाउ नै बेस हो र त्यो तिमीसँग भेट गराउने माध्यम धुजाधुजा पार्नु नै मैले गरेको उपलब्धि हो ।
गजलमा प्रयोग हुने बहरको बारेमा छोटो चर्चा - २
सु-बिचार फैलियोस । नब बर्षको शुभकामना !
दुई मुक्तक (यति धेरै माया तिम्रो)
मेरो सानो संसार तिमीलाई अटेन
आज भैली खेल्ने दिन
गजल (यस्तै छ जिन्दगी)
समकालीन नेपाली गजल २०६८को संछिप्त विवेचना
नेपाल मेरो देश
आँखाको निद खोसी लाने
उँट र स्याल
शुभकामना र बधाई
सहिदको बलिदानको उपहास नहोस्
नेपालमा जातजातिको उत्पति कसरी भयो? छोटो जानकारी
बगाएर तिम्रो खातिर आँसुहरू खून जस्तो
छुवाछुत धनी गरीब एक हुने दिन
मेरो देश (गजल)
कक्षा-९ र १० का दुई शैक्षणिक व्याकरणको शल्यक्रिया
नरित्तिने रै’छ आँशु
मेरी मायालु तिमी पुर्णिमाको जून जस्ती